KFC မှာ ကြက်ကြော်ဝယ်ရင်း တွေးမိတာလေးတစ်ခုပါ။ …. | မာသင်
KFC မှာ ကြက်ကြော်ဝယ်ရင်း တွေးမိတာလေးတစ်ခုပါ။ ….
တူညီမှု ဆိုတာ မတူညီကွဲပြားခြားနားမှု ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ် ဆိုတာပါပဲ။
ဘယ်ဆိုင်မှာ ဝယ်ဝယ် ကိုယ့် စားသောက်ကုန် အမျိုးအစား နဲ့အရည်အသွေး ကို တူညီစွာ ရရှိနိုင်မှု က အများနဲ့မတူညီမှု တစ်ခု ကို ဖန်တီးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခု ကိုတစ်မူထူးခြားဖြစ်လာစေပါတယ်။
တူညီမှု ဆိုတာလဲ လုပ်ငန်းတစ်ခု ကို မတူညီကွဲပြားခြားနားမှု ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။